Ny hoavin'ny lamaody mifampikasoka amin'ny fanontana 3D | Famoronana an-tserasera
Melisa Perrotta | | General, Inspiration, teknolojia
Miaina ao anatin'ny vanim-potoana iray izay mandroso haingana ny fandrosoana ara-teknolojia isika, miaraka amin'ny vidiny ambany sy amin'ny fidirana bebe kokoa. Ity vanim-potoana antsoina hoe «Tolom-piavotan'ny indostria fahatelo ity dia vavolon'ny fiovan'ny fitaovana sy ny fizotran'ny vokatra vokariny. Amin'izao fomba izao, Ny foto-kevitry ny orinasa dia niovaova ahafahan'ny marika manitatra ny faran'ny famokarana.
Sehatra izay efa tena voakasik'ity fanovana ity ny indostrian'ny lamaody; izany dia mbola nitazona ny fizotry ny famokarana mifototra amin'ny fanapahana sy famolavolana. ny fitomboana sy fanatsarana ny teknolojia fanontana 3D, antsoina hoe "manufacturing additive"; dia namela marika akanjo hamorona tetikasa mamorona sy manavao bebe kokoa.
Nampiasa an'ity haitao ity ny mpamorona hatramin'ny 2010. Saingy, vao izao no nahafahana namorona rindrambaiko mamela ny fanatanterahana tetikasa pitsopitsony be pitsiny sy kalitaon'ny filamentana tsara.
Ny tena izy dia ny fahaizany mivoatra mamokatra fahaizana bebe kokoa, izay manitatra ny faravodilan'ny mety ho famolavolana. Amin'izany no ahafahan'izy ireo manao zavatra toy ny hanafohezana ny fotoana itarihana, hampihena ny baiko, hampiakarana ny fahaiza-mamorona, na hampiasana ny volavola tsy azo namokatra teo aloha.
1 Jereo ny ho avy
1.1 Mety ho an'ny indostrian'ny lamaody
1.2 Fanontana manokana any an-trano
1.3 Mety ho an'ny mpamorona tsy miankina
Jereo ny ho avy
Mety ho an'ny indostrian'ny lamaody
Prototype an'ny sneaker fanontana 3D voalohany an'ny Nike
Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka ny fanontana 3D dia ny azy fahafaha-manao prototyping haingana. Midika izany fa ny mpamorona dia mamokatra santionany na lasitra haingana. Amin'izany fomba izany dia hihena ny fotoana famokarana sy fivoriambe, ahafahana santionany maro kokoa. Azo antoka, Ny fanontana 3D dia hanampy amin'ny fampitomboana betsaka ny volan'ny famokarana.
Ankoatry ny fisehoana fa ny fanontana 3D dia manimba ny tontolo iainana noho ny fampiasana plastika ho fitaovana lehibe dia tsy marina io fandikana io. Raha ny marina dia tsy maintsy tadidinao fa misy zavatra maharitra, tsy noho izy voajanahary, fa satria mahafeno fitoniana eo amin'ny tontolo iainana, sosialy ary toekarena.
Sneaker vita pirinty Adidas 3D
Amin'ity tranga ity, ny fanontana 3D dia iray amin'ireo fizotry ny famokarana izay Izy io dia miteraka dian-tongotra karbaona ambany satria ny habetsaky ny fako tafavoaka amin'ny dingana dia tsy misy. Ho fanampin'izay, saika ny fitaovana rehetra no ampiasaina ary tsy misy fitrandrahana ny tontolo iainana na ny olombelona, ​​mifanohitra amin'izay ataon'ny reperito maro amin'ny lamaody ankehitriny. Raha ny marina, ny fitaovana ampiasaina dia azo averina simba ary ny vokatra mitovy izay noforonina dia azo averina namboarina ihany koa.
Fanontana manokana any an-trano
Fa ahoana raha nolazaiko taminao fa amin'ny ho avy 3D fanontana afaka manala tanteraka ny indostrian'ny fanamboarana akanjo? Mety tsy dia misy dikany loatra izany, fa rehefa miresaka momba ny haitao dia tsy misy zavatra tsy azo atao. Mifandraika amin'izany, ny mpamorona Danit Peleg dia nivoatra tamin'ny 2015 ny fanangonana akanjo voalohany 100% vita amin'ny fanontana 3D. Namoaka izany ihany koa izy ho toy ny fanangonana izay azo atao pirinty ao an-trano miaraka amin'ireo mpanonta 3D izay azon'ny olona rehetra.
Nanaitra ny indostrian'ny lamaody ny heviny, satria avy amin'ity artifact vaovao ity dia afaka nanjary isika esory ny fizotran'ny fanamboarana akanjo araka ny ahalalantsika azy ankehitriny. Amin'ny ho avy, mety vitantsika izany misintona modely 3D avy amin'ny tranonkala mankany amin'ny "mpamorona akanjo nomerika." Avy eo dia azontsika atao pirinty manokana ny akanjo ilaintsika mandritra ny ora maromaro. Ary, raha miara-miasa amin'ny tsara indrindra amin'ny fitaovana rehetra ireo, angamba azontsika atao ny mametaka T-shirt tonta ary mamadika azy io ho vaovao hampiasaina maharitra.
Zahao eto ny horonantsary nangoniny:
Mety ho an'ny mpamorona tsy miankina
Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra rehefa miasa amin'ny marika akanjo dia ny filàna hamokatra singa marobe. Io singa famokarana io dia miankina amin'ny fisehoan'ny «Economy of Scale». Ity fitsipika ara-toekarena ity dia mamaritra fa ny habetsaky ny famokarana vidin'ny vidin'ny entana iray mihena. Midika izany fa Ireo mpamorona tsy miankina dia tsy maintsy miatrika fampiasam-bola tena avo lenta raha te hanana orinasa mpamokatra fitafiany mba hivarotra azy ireo amin'ny vidiny mirary. Noho izany, ny akanjo mpamorona dia mazàna lafo kokoa noho ny magazay antonony. Etsy ankilany, ny fotoana fandefasana dia lava be, satria amin'ny ankapobeny ny fizotran'ny lozisialy.
Akanjo vita pirinty 3D nataon'i Michael Schmidt ho an'i Dita Von Teese
Amin'izany heviny izany, Ny fanontana 3D dia manome ny mpamorona ny mety hahaleo tena amin'ny orinasa mpamokatra ivelany. Amin'izany no ahafahan'izy ireo mamorona ny vola tadiaviny, avy amin'ny alàlan'ny fampiononana amin'ny atrikasa misy azy ireo. Afaka manamboatra amin'ny vanim-potoana ilain'izy ireo izy ireo, nefa tsy mametraka baiko kely farafahakeliny toy ireo takian'ny orinasa. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, haingana kokoa, mahomby kokoa ary manana ny mety hampihena ny vidin'ny lozisialy.
Etsy ankilany, noho ny fanamorana ny prototyping, mpamorona mahaleo tena maro no mizaha toetra sy hevitra momba ny vokatra. Ny mpivarotra sasany dia mampiasa azy io ho toy ny fomba famokarana ho an'ny vokatra amidy amin'ny mizana kely amin'ny magazay an-tserasera toa an'i Etsy na tambajotra sosialy toy ny Instagram.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny hoavin'ny lamaody mifampikasoka amin'ny fanontana 3D